Nazi izixhobo zokukunceda ulungiselele ukuThengisa kwakho kwiYouTube- YTpals
Nazi izixhobo zokukunceda usebenzise ukuthengisa kwakho kwiYouTube
I-YouTube iye yaba ngumbhemu xa kufikwa kumxholo wevidiyo. Ngeebhiliyoni zabantu eqongeni, inika abantu ithuba lokujongwa kwihlabathi liphela kwaye babekho kwilizwe liphela.
Ngeenkampani ezinkulu ezisebenzisa oku ukulungiselela inzuzo yazo, abaqulunqi kufuneka babeke umzamo ngakumbi ekwenzeni umxholo wabo ubenomdla. Ngezixhobo zohlalutyo ezingaphezulu kunangaphambili, akukaze kube lula ukufunda ukuba izinto zakho ziqhuba njani kwaye wenze utshintsho.
Nazi izixhobo ezimbalwa ekufuneka ubenazo zentengiso ye-YouTube ngo-2021
Isixhobo esibonwe yiYouTube ngokwazo, iVidIQ ilungile ebantwini okanye kwiimpawu ezijonge ukukhupha amandla abo. Inika ukufikelela kwiimethrikhi ezifanelekileyo njengexesha lokubukela, imidiya yoluntu ekwabelwana ngayo, kunye neethegi nazo.
Ukwafumana izixhobo ezongezelelekileyo ezinje ngezixhobo eziphambili zophando, izilumkiso zeevidiyo ezihamba phambili. Uhlalutyo lwabakhuphiswano. Ijenali yeThumbnail, kunye noshwankathelo lwexesha langempela lwezibalo.
Isicwangciso esisisiseko sikhululekile ukuba singasetyenziselwa umsebenzisi omnye kodwa abantu abanamashishini kuya kufuneka bathenge isicwangciso esinexabiso eliphezulu. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye i-VidIQ inenkxaso enkulu kubathengi nayo.
Unokwenza umxholo osemgangathweni ophezulu kwi-Canva enceda abantu bathengise iimveliso zabo. Awusalufuni uncedo lobuchwephesha ukwenza iiflaya okanye iipowusta kunye neekopi zentengiso ezinkulu. Nge-Uva ekulula ukuyiqonda i-UI kunye neetemplate ezinkulu, nabani na onokwenza ukubonwa okutsala ngokulula.
Sisixhobo esikhulu solawulo lweendaba zosasazo esinceda ukujonga iiakhawunti zakho, ukuzibandakanya nabalandeli kunye nokubona ukuba abantu bayakunyathelisa okanye hayi. Ufumana ibhokisi engenayo eyahlukileyo yokulungiselela zonke izimvo zakho ze-Youtube kwaye ugcine ezinye iimpendulo eziqhelekileyo. Ungalawula iiakhawunti ezininzi ngale nto eyenza ukuba kulunge kuye nakubani na onamajelo ama-2-3 kwiYouTube.
Lulwandiso olukhulu lwesikhangeli kunye nesicelo esiphathwayo esinokwenza ulawulo lweakhawunti yakho yeYouTube yomoya. Ufumana ukufikelela kwigama elingundoqo lophando, iitemplate, izimvo zokucoca ulwelo kunye nokufumana ishedyuli yezithuba. Ufumana iingxelo ezineenkcukacha kwaye kulula kakhulu ukuzisebenzisa. Kukwicala elingabizi kakhulu kwibala kwaye esona sicwangciso sibiza kakhulu sixabisa ama-49 eedola ngenyanga.
Ngumngeni omkhulu ukucinga ngezihloko ezahlukeneyo zomxholo wakho. Ngale ndlela awufumani kuphela into efanelekileyo ufumana izimvo ezintsha zomxholo. Hlala usesikhathini malunga nokuhamba phambili kwaye wenze iividiyo ngokufanelekileyo.
Esi sisixhobo esisekwe kwi-SEO esinokukunceda ufumane i-funnel yakho yokukhula kwendalo. Ufumana iingcebiso zamagama aphambili, ulwazi lwe-SEO, kunye nohlalutyo lomxholo wexesha lokwenyani. Unga A / B izithombisi zakho zeYouTube kwaye ufumane iingcebiso zethegi.
Yenza iintloko ezinkulu nezinyanzelayo ngesi sixhobo. Abantu abaninzi bayalibala ukuba umxholo ophambili sisitshixo ekubambeni ingqalelo yabantu. ICoSchedule ikunceda ubhale ezi zihloko ziphambili ngokukunika amagama afanelekileyo kwiividiyo zakho. Isixhobo esikhulu sasimahla ekufuneka sisetyenziswe ngabantu abangazithembanga kwizakhono zabo zokubhala. Uya kuba nokugcwala okungcono ngale ndlela.
Thina kwi-YTpals sisisombululo sendawo enye sokuthengisa kwe-YouTube, ukuthengisa ividiyo, kunye nokwenza umxholo. Siya konwaba ngakumbi ukuba nawe kunye neengcali zethu ziya kukunika ukuqonda okukhulu kumzi mveliso weYouTube. Baza kukunceda ubuchule kunye nokwenza uphawu lwakho kwihlabathi le-YouTube.
Ngobuchule bethu kunye nokuphawula kwakho, akukho nto ingenakwenzeka. Nxibelelana nathi ngayo yonke imibuzo enxulumene nentengiso ku-YouTube kwaye ube lijelo osoloko unqwenela ukuba lilo. Khulisa ababhalisile bakho kwaye ufumane udumo lwehlabathi olukufaneleyo nathi.
Nazi izixhobo zokukunceda usebenzise ukuthengisa kwakho kwiYouTube ngababhali beYTpals, 11 Agasti 2021
Xa kuziwa kumaqonga okusasaza ividiyo, akukho nkulu ngoku ngeli xesha kuneYouTube. Iqonga livumele abaqulunqi bomxholo obutsha ukuba bazigcine besenza into abayithandayo, kwaye iqinisekile…
Icandelo elithi "Iividiyo eziCetyisiweyo" kuYouTube Ukuba ungumdali okhutheleyo kaYouTube, unganqwenela indawo kwicandelo likaYouTube elithi "Izindululo zakho". Kuyanika umdla ukuqaphela ukuba ikholamu “yeevidiyo ezicetyiswayo”…